Miisaanka iyo Saamaynta gorgortanka EcoBuilding - Xarunta EcoTechnology
Waxaa qoray Shelby Kuenzli, Digital Suuqgeynta EcoFellow, waxaa cusbooneysiiyay EcoFellows Fatin Chowdhury iyo Cassie Rogers
Waa maxay gorgortanka EcoBuilding?
Xarunta EcoTechnology waxay ku faaneysaa inay tiraahdo waxaan si guul leh uga dhigeynay cagaar macno samaynaya 45 sano ee lasoo dhaafay. Mid ka mid ah siyaabaha badan ee aan saamaynta ugu yeelan karno waa ku shaqeynta kuweenna Gorgortanka EcoBuilding dukaan. Tan iyo markii la furay 2001 (ka dibna loo yaqaan ReBuild), EcoBuilding Bargains ayaa noqday dukaanka qalabka dhismaha ee ugu weyn ee la isticmaalo ee New England. Waxay taageertaa hadafka CET iyada oo ka ilaalinaysa kumanaan tan oo agab ah meelaha qashinka lagu shubo. Sannadka 2019, waxaanu ka ilaalinay 222 tan oo agab aad u wanaagsan in aanu khasaarin anagoo siinayna macaamiisheena.
Waxaan jecelnahay Deeq-bixiyayaashayada!
Gorgortanka EcoBuilding waxay aqbashaa tabarucaadka qalabka hagaajinta guryaha oo tayo sare leh waxayna ka iibiyaan dadweynaha qiimo jaban goob tafaariiqeed oo habboon. Waxaan howsha u qabaneynaa si fudud oo fudud deeq bixiyeyaasha adoo siinaya adeeg bilaash ah oo soo qaadis ah, cashuur dhimis, iyo kaydinta kharashaadka qashinka. Kaliya maahan deeqahaani inay badbaadiyaan deegaanka, laakiin waxay sidoo kale badbaadin karaan deeq-bixiyeyaasha iyo macaamiisha lacag aad u tiro badan!
wuxuu fureyaa feylka IMAGE Qaar ka mid ah deeq-bixiyeyaasha ugu sarreeya ee qalabka waa qandaraaslayaal iyo milkiileyaal guryo leh alaab siyaado ah oo ka timaad dhismaha ama duminta guri. Dib-u-dhiska ayaa ah kala-daadinta taxaddar leh ee dhisme si loogu isticmaalo agabkiisa dib-u-isticmaalka, dib-u-dhiska, dib-u-warshadaynta, iyo maaraynta qashinka.
Kaarboon Isku Duwan Ayaa Ku Soo Kordha
The Qiyaasta EPA Maraykanku wuxuu soo saaray 600 milyan oo tan oo qashinka dhismaha iyo burburinta ah 2018, kaas oo koray tan iyo 534 milyan oo tan oo lagu qiyaasay in la soo saaray 2014. Qalabka dhismuhu wuxuu leeyahay kharashyo qarsoon oo deegaanka ah, iyada oo loo marayo wadarta qiiqa tamarta ee la soo saaro abuurista, sidoo kale loo yaqaan kaarboon ka samaysan. Sannadka 2019ka oo keliya, dukaankayagu wuxuu badbaadiyay 3,093 tan oo qiiqa kaarboon ah in lagu luminayo meelaha qashinka ah! Tani waa sababta burburintu ay muhiim u tahay. 20kii sano ee la soo dhaafay, EcoBuilding Bargains waxa ay gacan ka geysanaysay samaynta dhisidda hab fudud oo sahlan mulkiilayaasha guryaha iyo ganacsiyada si isku mid ah!
Maxaa Sababay Burburinta
Guryaha si taxadar leh loo dhisay si loogu ogolaado dib u soo celinta qalabka dhismaha waxay leedahay faa'iidooyin badan oo halis ah deegaanka:
Dib u dhisku wuxuu yareeyaa aqalka dhirta lagu koriyo ee cimilada beddelaya wuxuu fureyaa feylka IMAGE qiiqa gaaska ee ka imanaya qashin qubka iyo gubista.
Waxay yareysaa baahida loo qabo qashin qub badan. Qashin qub badan ayaa loobaahanyahay maadama qashinka dhismaha iyo duminta ay kusii kordhayaan. Qashinkani wuxuu tiriyaa in kabadan kalabar dhammaan qashinka adag ee Mareykanka.
Waxay yareyneysaa waxyeelada waxyeelada leh soo saarista kheyraadka dabiiciga, gaadiidka, iyo isticmaalka tamarta ee qalabka dhismaha cusub.
Waxay dib-u-warshadaynaysaa waxyaabo la isticmaali karo dib-u-isticmaalka iyo dib-u-soo-celinta hal-abuurka ah.
Waxay ku haysaa maaddada maxalliga ah, yareynta goosashada aan caadiga ahayn, macdanta iyo saamaynta gaadiidka.
Saamaynta Macmiilka iyo Bulshada
Marka laga soo tago saameynta leexinta qashinka EcoBuilding Bargains, dukaanku wuxuu sidoo kale sameynayaa saameyn isagoo siinaya fursado dheeraad ah oo deegaanka u wanaagsan macaamiisha. Tusaale ahaan, waxaanu iibinaa noocyo kala duwan oo nalalka LED-ka ah, weelasha compost ee guriga, iyo foosto roobka. Waxa kale oo jira doorashooyin rinji oo kharash-ku-ool ah iyo dhulka-saaxiibtinimo oo diyaar ah kuwaas oo laga sameeyay rinjiyada cinjirka ee dib loo warshadeeyey.
Gorgortanka EcoBuilding ayaa sii wadaya inuu kobco. Deeqaha waa heerkii ugu sarreeyay abid, sida iibinta alaabada dib loo rogay. Waxaan sii wadeynaa inaan sameyno saameyn weyn oo deegaanka ah anaga oo yareyneyna qaddarka qashinka galaya meelaha qashinka lagu shubo waxaanan isbeddel ku sameyneynaa Springfield annagoo abuureyno shaqooyin, u fidineyno barnaamijka barnaamijyada bulshada iyo waxqabadyada, isla markaana u siineyno alaab tayo leh macaamiisha qiimo jaban Istaag dukaanka agtiisa si aad u aragto waxa aan dhammaanteen ku saabsan nahay iyo sida aad qayb uga noqon karto samaynta cagaar macno samaynaya!
Gorgortanka EcoBuilding wuxuu furan yahay 9:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo Isniinta ilaa Sabtida iyo 11:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo Axadda. Gorgortanka EcoBuilding wuxuu ku yaalaa 83 Warwick St., Springfield, MA 01104.
Isku day a Ballanta wax iibsiga Virtual oo aan ku tuso agagaarka dukaankayaga LIVE oo leh Khabiir Iibka Tooska ah! Intaa waxaa dheer, waad awoodaa booqo dukaankayaga eBay alaabta diyaarka u ah in si toos ah laguugu soo dejiyo.
Macluumaadka ku saabsan sida wax loo bixiyo, guji halkan. Booqasho Shabakadeena Si aad u aragto xulashada waxa aan haysano, ama naga soo wac (413) -788-6900 haddii aad wax su'aalo ah qabtid.
Ma sugi karno inaan ku aragno!